भारतमा बर्डफ्लु देखिएपछि चितवनमा उच्च सर्तकता
पुस २४, चितवन । भारतका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु देखिएपछि चितवनमा पनि उच्च सर्तकता अपनाउन थालिएको छ ।
चितवनमा पोल्ट्री किसान एवम् यस सम्बन्धी सरकारी कार्यालयले जैविक सुरक्षामा विशेष सर्तकता अपनाउन थालेका हुन् । चितवन भारतको सीमानाका नजिक रहेको र अवैध रुपमा पोल्ट्रीजन्य वस्तुको ओसारपसार हुनसक्ने जोखमलाई मध्यनजर गरी सर्तकता अपनाईएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले भारतमा बर्डफ्लु देखिएकोले उच्च सर्तकता समयमै अपनाउनु पर्ने बताए । उनले भारतबाट आउने कुखुराजन्य वस्तुको आयात तत्काल रोकेर जैविक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बर्डफ्लुका कारण भारतमा कुखुराजन्य वस्तुको मूल्य घट्ने र यही मौकामा नेपाल अवैध रुपमा कुखुराको अण्डा तथा मासु भित्रिन सक्ने भएकोले सर्तकता अपाउनु पर्ने विष्टको भनाइ छ ।
नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले भारतमा बर्डफ्लु देखिएपछि अवैध कुखुरा तथा अण्डा भित्रिन सक्ने भएकोले सीमानाका तथा अन्य यस्ता शंकापस्पद सवारी साधनलाई निगरानी गरिएको बताए । यस्तै अन्डा, दाना, चल्ला, कुखुरा बोक्ने सवारी साधन जिल्लामा भित्रिन नदिइएको तथा त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई निसंक्रमित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘जिल्ला भित्रका पोल्ट्री फर्महरुलाई निसंक्रमित गर्ने काम पनि भइरहेको छ । किसानहरुलाई पनि सचेत गराइएको छ ।’ उनले भने । कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले सबै मातहतका कार्यालय तथा विभागलाई सतकर्ता अपनाउन आग्रह गरेसँगै चितवन जिल्लामा समेत उच्च सर्तकता अपनाउन लागिएको हो ।
भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनका प्रमुख डा. दयाराम चापागाईंले मन्त्रालय र विभागबाट विज्ञप्ति र पत्राचार आईसकेकोले चितवनमा पनि सर्तकता अपनाउन किसान तथा व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको बताए ।
‘मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार हाम्रो तयारी छ, उनले भने, चितवनका किसान व्यवसायी आफै पनि सचेत छन् ।’ चितवनमा बर्डफ्लुको कुनै लक्षण नदेखिएपनि किसान तथा व्यवसायीलाई सचेतना तथा अभमुखीकरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय पंछीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी डा. इन्दुराय यादवले अहिले तुलनात्मक रुपमा पहिलेकोभन्दा हाल सजगता अपनाइएको बताए ।
प्रयोगशालाद्वारा चितवनमा नमूना संकलन बढाउने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार केही कुखुरामा एच ९ पोजेटिभ देखिए पनि अहिलेसम्म बर्डफ्लु (एचफाइभ एनवान) भने देखिएको छैन । र्‍यापिड एन्टिजम टेस्ट किटबाट परीक्षण गर्दा एभिएन इन्फ्लुएन्जा टाइप ए पोजेटिभ आए पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइने उनले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागले बर्डफ्लु नेपालमा भित्रिन नदिन भारतबाट जीवित पंक्षी, मासु अण्डा तथा पशुजन्य अप्रशोधित पदार्थहरू भित्र्याउन रोक लगाउंँदै आएको छ । विभागले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा ११ बमोजिम यो निर्णय गरेको हो । भारतबाट त्यस्ता पशुजन्य पदार्थ आयात हुन नदिन विभागले ८ ओटा पशु क्वारेन्टाइन र २४ ओटा चेकपोस्ट कार्यालयलाई उच्च शतर्कता अपनाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।